dadka ku nool bariga walega ayaa sheegay in ay iskudhacyada halkaasi ka jira ay isasoo tarayaan – ዜና ከምንጩ
የእለት ዜና 182 0
dadka ku nool bariga walega ayaa sheegay in ay iskudhacyada halkaasi ka jira ay isasoo tarayaan
dad aan tiradooda la hubinna waxa lagu laayay halkaasi qaar kalena way ku baro kaceen.
dad ku nool degaanka oromiya gaar ahaanna bariga welega oo u waramay addis maled ayaa sheegay in xasilooni darida isasoo tatraysa ay walaac ku abuurtay.
dad ku nool giidha ayaana iyo dagmada liimu ayaa sheegay in kooxo hubaysan ay gaadhsiiyaan dhibaatooyin faro badan, sidaasi awgeedna ay dad badani ka cararaan meelihi ay daganaayeen iyo hantidoodaba. si gaar ahna todoobaadki aan soo dhaafnay in dhibaatooyinkaasi ay aad u soo kordheen bay sheegen. meelahasi aan kor ku soo xusnay in ay kooxahaasi hubaysani ay dadka ku laayaana oo ay ku baro kiciyaan sida oo kalena ay hantidooda ku dhacaanna way sheegeen.
waxa ay wargayska addis maleda ugu warameen oo kale in dhawaan dagmada haro limu gaar ahaanna meesha loo yaqaano agaamsa in dad ay tiradoodu gaadhayso in ka badan 100 qof ku laayeen hub culus, sida oo kale dadkaasi halkaasi lagu laayay kasakow waxa halkaasi ka cararay oo ka qaxay dad aan tiradooda la qiyaasi karin.
qaar ka mid ah dadka halkaasi dagan oo aan rabin in magacooda la sheegin si nabadgalyadooda ay u sugnaato ayaa addis maleda u sheegay in dagmada loo yaqaano angergutin giidha xafada mendher sidhist si gaar ahaaned todobaadki an ka soo gudubnay dad badan lagu laayay. 15 qof oo ay haysteen kooxaha hubaysani ayaa markii ay dareemeen in ay ku laynayaan hub bila cod ah isku riday wabi agtooda ahaa, sidaasina ay ku dhinteen.
sida ay ugu warameen wargayska addis maleda goob joogayaal halkaasi joogay in dadki isku dayay in ay ka baxsadaan ee wabiga isku tuuray laba ka mid ah lagu dilay toogasho intii kalena ay wabiga isku tureen oo ay halkaasi ku geeriyooden.
dadkii halkaasi ku noola ayaa sheegay in markasta kooxaha hubaysan ee oneg shane ay bulshada rayidka ah ee halkaasi dagan u gaystaan khasaare naf iyo maalba ah oo soo noqnoqota. kooxahaasi hubaysan ee falalka argagaxisada ah ee foosha xun u gaysanayaan bulshada rayidka ah dawlada federaalka iyo nabad sugida deegaanka oromiyaba wax gargaar ah oo ay uga qabteen ma jirto bay yidhaahdeen taasina waxa ay sii xoojisay dhibaatooyinkii halkaasi ka jiray.
wargayska addis maleda oo xogta ka soo uruursaday dadkii halkaasi ku noola ayaa waxa u soo ogaaday in dhibaatooyinku ay sii kordhayaan oo ay kooxaha hubaysanina falalka argagaxiso ee ay geeysanayaanna soo noqnoqdaan. in beero laydi halkaasi daganana ay midhahoodi uruursan kari wayeen oo ay ka qaxeen meelihi ay daganaayeen oo ay noolashooduna khatar ku sugantahay.
bulshada halkaasi ku nool ayaa sheegaysa in si gaar ah meelaha ay ku noolyihiin aanay haba yaraate ka jirin wax nabad sugud ahi. dadki halkaasi ku dhintayna in eheladoodu ay aasan kari waayeen oo tacadiyaadyada faraha badan ee loo gaysanayona ay sii kordhayaan oo xal loo heli wayayna ay ku noqotay walaac.
wargayska addis maleda dadkii u waraysta ayaa sheegay in kooxaha hubaysani ay ka dhaceen dadki ku noola dagmada giidha ayaana angert gutin meesha la yidhaahdo xoolohoodi, sida oo kale meesha lagu magacaabo arqunbi in ay sadix melood ka dhaceen xoolohoodi oo ay meel ku uruursadeen oo ay ku ilaashadaan.
waxa kale oo ay sheegeen dadkaasi in maamulka magalada gutin u ku yidhi waxba idiin ma qaban karno oo arintu anaga way naga awood badantahay ee shacabku ayagu ha is ilaaliyaan, sida oo kale madaxdi halkaasi joogtay iyo shaqaalihi dawladuba in ay magaaldi ka baxayaan ayay sheegen.
wargayska addis maleda oo isku dayay in u ka waraysto arintan madaxa xafiiska xidhiidhka arimaha dawlada ee deegaanka oromiya mudane Geetachew Baalcha ayaa fariimo u diray iskuna dayay in tilifoon u ku waraysto wargayskuse wax jawaab ah kamusan helin.
Total views : 6422359